ကာတွန်း ဝင်းထွန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
>Daw Suu visitedaclass of traditional hand weaving course
>Cyclonic storm Bijli heading to Bangladesh-Burma coastline
မောင်စွမ်းရည် - ကွန်မြူနစ်တယောက်ရဲ့ နှလုံးသား
5th August - မိုးမခရေဒီယို
ဇော်သစ် - အံ့ထူးမော်ကို ရှာပေးပါ (၀တ္ထုတို)
ကာတွန်း စောငို -နှစ်သစ်ကို ကြိုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တေးသံ
ကာတွန်း စောငို - အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ
>Naing Lin Aung - Thai Politics From A Burmese Perspective
Posts Tagged ‘ ကာတွန်း ဝင်းထွန်း ’
ကာတွန်း ဝင်းထွန်း ● မီးကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများ ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ ….
ကာတွန်း ဝင်းထွန်း ● မီးကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများ ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ …. (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆ ကာတွန်း ဝင်းထွန်း (Mr Burma) ရဲ့ ကာတွန်းဟောင်းလေးပါ။ ကာတွန်းဆရာလက်မှတ်အရ ၁၉၈၇...